8 Mahara kana Kuderedzwa Kunyorera, kweiyo Yakatemerwa Nguva (Ndira 24) | IPhone nhau
Kamwe zvakare, nhasi ndamuka ndichida kutsvaga uye kukupa iwe yakanakisa zvipo izvo zviripo zveApp Store mu zvemahara application, kana nezvishoma zvinotapira, zveedu iPhone, iPad uye iPod Kubata zvishandiso. Nhasi tine akasiyana siyana maapplication, saka tarisa zvakanaka, nekuti zvirokwazvo mamwe acho ndeawaive uchitsvaga kana zvirinani, zvichauya zvinobatsira iwe.
Izvi zvinotevera zvinopihwa uye zvidzoreso zviri Nguva Yakatemwa, zvinoreva kuti vanofa nekukurumidza kwazvo. Isu tinoziva kuti zvinoshanda panguva yatinoburitsa ichi posvo, zvisinei, isu hatigone kuvimbisa kuti zvichave zvinoshanda kwenguva yakareba, uye hatizive kuti zvinopera nguvai nekuti vanogadzira havawanzo kutaurirana nezvazvo. Naizvozvo, tora mukana uye kana iwe uchifarira chero eaya emahara kana akaderedzwa kunyorera, tora nekukurumidza.
1 Astro 3D +: Tungamira kumatenga ehusiku
2 QR Kit Pro: Yakanakisa Yemahara app yeScan Solution
3 OneDay: Kuverengera Kunze Kwakanakisa Nguva Muhupenyu Hwako Ine Mapikicha Anopunzika Uye Ndangariro
4 KumbaBudget ine Sync
5 Zuva rekuzvarwa
6 Yakarongeka - Seta zvibodzwa track nguva yekutevera tsika rondedzero pro HD
7 Gadzira Pocket
Astro 3D +: Tungamira kumatenga ehusiku
Isu tinotanga neyekushandisa zvemukati yekushandisa, Anstro 3D +. Zviri nezve "Inotakurika nyeredzi Atlas" yakagadzirirwa vese nyanzvi neruzivo rweZvose uye kune avo vashandisi vanoda kudzidza zvakawanda.
Shandisa Astro 3D + kuti uwane mapuraneti, nyeredzi, mapoka enyeredzi, masumbu enyeredzi, magaraxies uye nebulae anoonekwa kwauri zvichienderana nenzvimbo yako nenguva. Astro 3D + inotoshandisa kambasi kugadzirisa mapu!
Astro 3D + Iyo ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana ne33% dhisikaundi ye € 1,99 chete.
QR Kit Pro: Yakanakisa Yemahara app yeScan Solution
Iko kunyorera kweavo vatinosanganisira muchikamu chekushandisa nekuti ne QR Kit Pro unogona gadzira uye tarisa QR kodhi, barcode uye zvinyorwa nyore kubva kune yako iPhone uye iPad.
QR Kit Pro Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
OneDay: Kuverengera Kunze Kwakanakisa Nguva Muhupenyu Hwako Ine Mapikicha Anopunzika Uye Ndangariro
Neapp Nerimwe zuva hauzombokanganwa nguva dzakakosha kwazvo dzehupenyu hwako zvakare Zvakanaka, iwe unogona kuseta iyo yekuverengera kuti urangarire iyo yakakosha bhizinesi musangano, yako yemuchato mhemberero uye zvimwe zvakawanda.
Nerimwe zuva Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
KumbaBudget ine Sync
«HomeBudget is a yakabatanidzwa mari yekutengesa yakagadzirirwa kubatsira iwe kuteedzera yako yemubhadharo, mari, mabhiri, uye account zviyero. Iyo inopa rutsigiro rwemabhajeti uye inobvumidza kuongororwa kweako mari uye mari, kusanganisira machati uye magirafu.
KumbaBudget Iine mutengo wenguva dzose we4,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana ine 40% dhisikaundi ye2,99 euros chete.
Zuva rekuzvarwa hazvisi zvinopfuura zvakapusa asi zvakanaka Bhavhudhe "chiyeuchidzo", kuitira kuti usazokanganwa iwo mazuva akakosha zvakare.
Zuva rekuzvarwa Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Yakarongeka - Seta zvibodzwa track nguva yekutevera tsika rondedzero pro HD
Ichi "chakasarudzika chigadzirwa chekushandisa" sezvo zvichikubatsira iwe tsvaga kuti ndeipi nguva yakanyanya kunaka yekuita mabasa ako. Kuti uite izvi, inoongorora zviitiko zvako zvezuva nezuva, inopa mazano uye nekudaro zvinokubatsira iwe kuti uve ne "hupenyu hunogutsa uye hwakaenzana."
Yakarongeka Iine mutengo wenguva dzose we5,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuitora kwechitanhatu chete kukosha kwayo, 0,99 euros.
Gadzira Pocket Ndicho Zadzisa dhizaini yekushandisa ye iPhone ine hunyanzvi maficha iyo "inobvumidza iwe kunyora uye kuratidza pfungwa chero nguva uye chero kupi kufemerwa kunomuka."
Inotungamirwa neiyo imwechete yechimurenga 64-bit Silica injini sehama yayo hombe, Procreate Pocket ™ yakagadzirirwa kutora mukana izere neiyo iPhone® Hardware (kunyanya iPhone 6 uye iPhone 6 Plus). Sketch uchienda, uye AirDrop basa rako kuenda kuPad ​​kuti uenderere mberi muProcreate®.
Gadzira Pocket Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana ine 66% dhisikaundi ye0,99 euros chete.
ChipPhoto zvinokutendera kamura mapikicha ako kuita zvidimbu zvidimbu. "Chimwe nechimwe chezvidimbu chinogona kutamisirwa kunzvimbo ipi neipi mumufananidzo uye zvese zvinogadziriswa muhukuru."
ChipPhoto Iyo ine yakajairwa mutengo we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 8 Mahara kana akaderedzwa kunyorera, kwenguva yakati rebei (Ndira 24)